Nezvedu - HuaHeng International Packaging Co., Ltd.
Hwakagadzwa muna 2009, HuaHeng International Packaging Co., Ltd.ari nyanzvi mugadziri nyanzvi bepa rokudhinda uye kavha. Iyo ine yakakwana yekugadzira tekinoroji uye maitiro ekushandisa. Kubva payakagadzwa, nekuda kwekutarisa kwakasarudzika dhizaini dhizaini, yakasimba tekinoroji yekutsvagisa uye timu yekusimudzira, uye inofunga nezvehunyanzvi sevhisi yebasa, yakaunganidza akawanda emakesi akabudirira uye yakapa masevhisi ekupakata emabhizimusi e200+ anozivikanwa epamba.
Isu tinonyanya kuita imwe-yekumira kurongedza dhizaini, kutsvagisa nekusimudzira, kugadzirwa kwemhando yepamusoro mabhokisi, mabhokisi ezvipo, makadhibhokisi mabhokisi, PVC mabhokisi, kristaro mabhokisi, zvinyorwa uye mirairo. Tiri iri Shenzhen pamwe yakakunakira chokufambisa. Tarisa pane zvigadzirwa kurongedza hutsva Mhinduro yacho inoita kuti chigadzirwa chitengese chakakwirira uye bhizinesi riwedzere kukwikwidza, uye rakazvipira kupa vatengi chiyechete-chinomira se "R&D, proofing, kugadzirwa, uye chekufambisa".
Huaheng mubatanidzwa unodada nekuve wechokwadi, mutsva, unokurudzirwa uye unoramba uchirwira kukwirisa kwevatengi vedu vese. Yedu yemazuva ano, yakasanganiswa yekugadzira system inoita kuti tikwanise kupa vatengi vedu zvigadzirwa zvemhando yepamusoro pamakwikwi emitengo. Pamusoro pekuchengeta akasiyana-siyana uye anochinja-chinja marongero emidziyo, isu tinoisa zvakanyanya kusimbisa pachirongwa cheR & D nekumisikidza Design Centres. 75% yezvigadzirwa zvedu zvinoshandiswa needu nyanzvi dhizaini timu. Mwedzi wega wega pane zvigadzirwa zvitsva zvinokurudzirwa kuti vatengi vataure nezvazvo.
Vatengi vatinoshanda vanobva kuHongKong, Singapore, Japan, UAE, Russia, Sweden, USA, Canada, Italy, Belgium, Spain, Austria nezvimwewo.
Huaheng mubatanidzwa yagara yakamisikidza bhizinesi kutenda kwe "Yakanyanya kukosheswa, mhando yepamusoro, kumira kwenguva refu", uyezve, isu tinotarisana nekuenderera kwehunhu kusimudzira, kugara uchivandudza zvivakwa, kuwedzerwa kwekuvapo kwenyika dzese, uye nekupa hunhu hukuru kusimudzira vatengi 'mhedzisiro.
Isu tine chokwadi chekuti michina yemhando yepamusoro inovimbisa mhando yepamusoro, uye timu yehunyanzvi inoperekedza masevhisi emhando yepamusoro! Isu tinogutsikana kuti munharaunda inokwikwidza ino inozivikanwa ne "kumhanyisa, kugona kwakanyanya uye mhando yepamusoro", iwe une kukurumidza kumhanyisa uye hunoshamisa hunhu.
Shenzhen Huaheng Gaosheng Environmental Protection Technology Co, Ltd. yakagara ichitevedzera musimboti we "mhando, mukurumbira kutanga" uye ichigara ichiteera pfungwa yevatengi kutanga uye hunyanzvi. Isu tinozvida isu nezvakanaka zvemhando yakanaka, yakaderera mutengo uye nekukurumidza kuendesa, uye panguva imwechete kusangana izvo zvinodiwa zvepasirese kurongedza uye kudhinda, izvo zvinoita kuti isu tivimbiswe kwazvo nevatengi vatsva nevakuru! Iyo zvakare inogonesa iyo yemusika bhizinesi musika kuti iwedzere kukura. Iye zvino vatengi vedu vari mumatunhu anopfuura makumi matatu, matunhu uye nzvimbo dzakazvimiririra, uye kunyangwe Hong Kong, Macao neTaiwan matunhu. Zvigadzirwa zvedu zvatengeswa kumatunhu anopfuura makumi matatu nematunhu pasi rese. Sarudza isu, isu zvechokwadi ticharatidza kuti sarudzo yako ndeyechokwadi.
1. Shenzhen Huaheng Gaosheng Environmental Protection Technology Co, Ltd. inoshandisa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvekuchengetedza nharaunda kugadzira edu epurasitiki ekupakira mabhokisi ekupfeka-asingagone, akasimba kuputika-chiratidzo, anopenya uye akajeka, uye anenge asina chaanopomerwa. Akawanda emukati emhando yekuongorora anodzora mhando yezvigadzirwa kubva kunobva kuona kugona kwekugadzira; kuburitswa pamwedzi kwezvinhu zvakajairika mumabhokisi anoenderana kunogona kusvika angangoita mamirioni maviri, uye iyo michina yakwana zvakakwana. Iyo zvakare inopa inopisa kutsika, sirivha inopisa, esimbi mavara, matte uye machira akasiyana akakosha ekudhinda mhedzisiro, senge zviyo, huni zviyo uye dehwe zviyo, ita mutengi wekupakata dhizaini yakaratidzwa zvakanaka.
2.Iine yega-yega nzvimbo yekudyara yeinosvika 5500 mativi emamirimita, yakapasa mutengesi kuongorora chitupa nhamba chitupa, ine yakakwana manejimendi vashandi, yakasimba tekinoroji simba, nyanzvi yekurongedza bhokisi rekutsvagisa nekusimudzira uye dhizaini, uye ine CTP ndiro inogadzira dhipatimendi. . Iyo kambani inoteerera kusarudzwa kwechigadzirwa uye inotora zvinhu zvine nharaunda. Icho chigadzirwa chigadzirwa chakapfuura akawanda ezvitifiketi zvechitupa, uye hunhu hunovimbiswa. Dhizaina yemahara uye proofing yemahara inogona kupihwa kusangana nezvinodiwa nevatengi zvekurongedza mabhokisi.
3. Iyo kambani inounza michina yepamusorosoro yekugadzira uye nzira dzekuyedza-tech; adopts yemhando PLC programmable controller hurongwa, nyore redunhu kudzora maitirwo ezvinhu, nyore yokuzvigadzirisa. Uye iyo nyowani yakatumirwa kunze kweGerman michina yekudhinda inotorwa kubva kunze kwenyika, michina yekudhinda, yekufa-yekucheka michina, yekunamira michina, inopisa kutsika michina, semi-otomatiki uye otomatiki bhokisi otomatiki gluing michina, otomatiki mapepa anotema, skrini yekudhinda michina, UV yekudhinda michina uye mamwe midziyo, Zvizere zvekutsigira zvivakwa. Kugadzira kunokurumidza, kuendesa kunonyanya kuitika, uye zvigadzirwa zvinowedzera zvakakwana.
4. Kubva pane dhizaini, kugadzirwa, kudhinda, post-kugadzirisa, kusvika pakuendesa, isu tinoshandisa imwe-yekumira sevhisi, yakakwana vatengi manejimendi sisitimu, mushure mekutengesa vimbiso, kubva kugadzirwa kwechigadzirwa, manejimendi manejimendi, manejimendi manejimendi, manejimendi manejimendi manejimendi uye mushure mekutengesa sevhisi. manejimendi. Panyaya yekupa masevhisi kune vatengi, uye inogona kupa vatengi zvigadzirwa zvekurongedza mhinduro, kubva ku proofing kusvika pakugadzira kudyara imwechete-yekumisa kupera.